सुन्तली आजदेखि मुलुकभर - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / सुसेली र सुस्केराहरु / सुन्तली आजदेखि मुलुकभर
काठमाडौ, १ फागुन ।
चार महिनाअघि नै दक्षिण कोरियाको बुसान फिल्म फेस्टिभलमार्फत वल्र्ड प्रिमियर भइसकेको नेपाली फिल्म ‘सुन्तली’ को शुक्रबारे रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रिमियर गरिएको छ ।
भाष्कर ढुंगाना निर्देशित फिल्म शुक्रबारदेखि देशभर लाग्दै छ । फिल्मको मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी प्रियंका कार्कीसहित अन्य कलाकारहरू सूर्यमाला खनाल, अर्पण थापा, कर्मा, प्रमोद अग्रहरि, राजकुमार पुडासैनी लगायतको अभिनय रहेको छ ।
‘मलाई सानैदेखि कलात्मक फिल्म मनपर्छ । के नेपालमा पनि कलात्मक इन्टरटेनिङ फिल्म बन्न सक्दैन होला भन्ने सोच्थें । र, अन्त्यमा मैले सुन्तलीको संसार भेटें,’ प्रिमियर सोअघि निर्देशक भाष्करले भने, ‘टिमका अरूले मेरो संसार बुझे अनि त्यसमा थपथाप गरेपछि यो फिल्म जन्मियो ।’ उनले आफ्नो २० वर्षदेखि बनाएर सुनाउन चाहेको कथामा आँट गरेको सुनाए । यसै फिल्मबाट सूर्यमालाले लामो समयपछि नेपाली फिल्ममा कमब्याक जनाएकी छन् । उनी फिल्ममा चिनमाया सुवेदार्नीको भूमिकामा छिन् । ‘सुन्तली’ चिनमाया र सुन्तलीबीचको द्वन्द्वमा केन्दि्रत छ । चार वर्षपछि चिनमायासँगको बदलाभावले गाउँ फिरेकी सुन्तली र छोराको बिहे तयारीमा रहेकी चिनमायाबीच पहिले के भएको थियो ? सुन्तलीले किन बदला लिन चाहन्छे ? डार्क कमेडी शैलीमा बनेको फिल्मले त्यसको उत्तर दिने प्रयास गरेको छ । ‘गाउँमा हुने चिया गफको कथालाई पोइटिक ढंगले टि्रट गर्न खोजेका मात्रै हौं,’ भाष्करको भनाइसँग फिल्म हेरेपछि धेरै सहमत देखिए । फिल्मले सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेको छ ।
प्रवीण अधिकारीको पटकथा रहेको फिल्ममा अन्ड्र बेलिसियाको छायांकन रहेको छ । तनहुँको बन्दीपुरमा खिचिएको फिल्मले त्यहीको कथा बोलेको छ । स्थलगत ध्वनिको प्रयोग गरिएको फिल्ममा पाश्र्व संगीत रोबर्ट जिसाको रहेको छ भने जेसन कुवँरको संगीत रहेको छ । पौने दुई घन्टा लामो फिल्मलाई ब्लु पपी फिल्म सो ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो । ‘सुन्तली’ बाट निर्देशनमा डेब्यु गरेका भाष्करले यसअघि ‘कागबेनी’ र ‘सानो संसार’ मा लगानी गरेका थिए । निर्देशनमा एकवर्षे अध्ययन गरेर स्वदेश फिरेपछि उनले ‘सुन्तली’ को निर्देशन गरेका हुन् ।
शुक्रबार नै वान वे पनि
‘सुन्तली’ सँगै शुक्रबारदेखि सुरज सुब्बा ‘नाल्बो’ निर्देशित फिल्म ‘वान वे’ को पनि रिलिज भएको छ । परिवारमा आमाबाबुबीच हुने कलहले सन्तानमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई दर्साउन खोजिएको फिल्ममा सिद्धार्थ गुरुङ र माला लिम्बू लिड रोलमा रहेका छन् । उक्त जोडीले ‘वान वे’ बाटै डेब्यु गरेको हो । द्वयबाहेक रविन तामाङ, करिश्मा मानन्धर, भानुप्रताप, विल्सनविक्रम राई, आकाश खबास लगायतको पनि फिल्ममा अभिनय रहेको छ । प्रदीप भट्टराईको पटकथा लेखन रहेको फिल्मका निर्माता सिद्धार्थकै बाबु राजीव हुन् । खासगरी उनी दीपक मनांगेको नामले बढी चिनिन्छन् । ‘वान वे’ ले पनि बुधबार प्रिमियर सो गरेको थियो ।